Deg Deg: RW Rooble oo Muqdisho kaga dhawaaqay Dagaal ka dhan ah Alshabaab. - Ogaden24 | Ogaden24
Deg Deg: RW Rooble oo Muqdisho kaga dhawaaqay Dagaal ka dhan ah Alshabaab.
Oct 14, 2020 - Aragtiyood
Ra’iisal wasaaraha Dowlada Federaalka Dalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu maanta shaaca ka qaaday in uu iclaaminayo dagaal ka dhan ah kooxaha alshabaab oo ka dagaalama koonfurta iyo Badhatamaha Dalka Soomaaliya.
Rw Rooble oo maanta hadal ka jeediayay Munaasibad lagu qabtay Tiyaatarka Qarnka oo xus iyo duco loogu sameeynayay dadkii ku dhintay qarixii 14-kii Oktoobar 2017 ka dhacay Isgoyska Soobe ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay la imaaneyso qorsho lagu cidhib tirayo kooxaha Al-Shabaab oo hagardaamo ku haya Shacabka Soomaaliyeed.
Waxa uu intaas ku daray Rooble in ay foojignaadaan Dadka Soomaaliyeed,isaga oo sheegay Ra’iisal wasaaruhu in ay dadka ehelka la ah ay ku fuliyaan gawaaridooda kooxaha dhagar qabayaasha ah,taasi oo uu uga digay dadku in ay il gaar ah ku eegeen dadka gaadiidkooda ay amaahinayaan.
maanta oo kale 14 October Muqdisho waxaa ka dhacay Qarax galaaftay Nolosha dad gaadhaya 1.000 kun qof iyo dhaaac intaas ka badan ,kaasi oo ka dhacay isgoyska Zoobe ee badhatamaha caasimada Soomaaliya.